Drum Heater, Silicone Heater, Igobolondo Heater, wokuvimbela Syech - Pamaens
Heating & ukwahlukanisa izixazululo, wena nje
Shanghai PAMAENS TECHNOLOGY CO., LTD ngokukhethekile-R & D, ukukhiqiza kanye yokuthengisa Ukushisa energy osindisa futhi imikhiqizo ukwahlukanisa. PAMAENS inikeza ukufakwa, ukuqeqeshwa kanye emva-ukudayiswa eyodwa-stop service. PAMAENS isibe umholi emkhakheni isicelo zezimboni energy esisindisa ugesi technology e China nakwamanye amazwe.
PAMAENS ayesithole ISO9001 CE futhi RoHS izitifiketi. Lusebenza test esiqinile futhi ukulawula yonke ingxenye eyodwa imikhiqizo kanye zonke ukucutshungulwa isinyathelo. Imikhiqizo kudayiselwa Europe, American, Middle East, South Eastern Asian, e-Australia, eJapane, Russia njll
PAMAENS has esiqinile ukulawula izinga uhlelo ku nokuhlonza izinto, ekukhiqizeni ngamanani amancane ukucutshungulwa, nemikhiqizo sokuhlola. Silwela ku usebenzisa izinga okusezingeni impahla eluhlaza kanye nokuhlola konke ukuphithizela izinto sizosebenzisa.
PAMAENS wethu inkampani, has ISO 9001, izitifiketi CE futhi izitifiketi RoHS ngoba iningi imikhiqizo yethu.